स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि नपाउने र डाक्टर पनि नभेट्ने जनगुनासो – इन्सेक
सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित स्वास्थ्यकर्मी बस्ने र निःशुल्क औषधि पाइने प्रचार गरिरहेको भएपनि धनुषाको ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि नपाउने गरेको जनगुनासो छ ।
औषधि हुँदा दिनहुँ बिरामीको भीड लाग्ने क्षीरेश्वरनाथ नपा-५ महेन्द्रनगरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि नपाइने गरेको र्सवसाधारणको गुनासो छ ।
ग्रामीण भेगका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था हिान ११ बजेपछि मात्रै खुल्छन् र २ बजे बन्द भइसक्छन् । एक मेडिकल अधिकृत (एमबीबीएस) सहित १३ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यदुकुहामा माघ २१ गते पाँच जना कर्मचारी कार्यस्थलमा भेटिएका थिए ।
हेल्थ असिस्टेन्टसहित ६ जनाको दरबन्दी भएको पचहर्वा स्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यालय सहायकसहित दुई जना मात्रै फेला परेका थिए ।
उपस्वास्थ्य चौकी पौडेश्वरमा २ बजे पुग्दा कोही थिएनन् । कार्यालयमा ताला लागेको थियो । कार्यालय सहायकको भरमा सञ्चालित सोनिगामा स्थित आयुर्वेदिक औषधालयमा बिरामीहरू स्वास्थ्यकर्मी पर्खेर दिनभर बसिरहेको भेटिए ।
स्वास्थ्य केन्द्र यदुकुहामा एमबीबीएस चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि एक वर्षदेखि उनी विदामा छन् । निमित्त कार्यालय प्रमुख महेन्द्र साहका अनुसार दरबन्दीका डा. अजयकुमार यादवले एमडी पढ्न अध्ययन विदा लिएका हुन् ।
पचहर्वा स्वास्थ्य चौकी अगाडि भेटिएका स्थानीय सुरेश कापरका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नियमित कार्यालय आउँदैनन् । आए पनि औषधि दिँदैनन् । तर, निमित्त प्रमुख अहेव सन्तकुमार मण्डलले औषधि नियमित रूपमा वितरण गरेको दावी गरे ।
धनुषाको यदुकुहा, धनुषाधाम, महेन्द्रनगर, सबैला, परवाहामा मेडिकल अधिकृत -एमबीबीएस) को दरबन्दी भएको सुविधा सम्पन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । हेल्थ असिस्टेन्टसहित ६ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भएका ९८ ओटा स्वास्थ्यचौकी छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गर्ने ओपीडी सेवा दिनभर दिने भनिएको छ । तर, स्वास्थ्यकर्मी दिउँसो २ बजेसम्म मात्रै सेवा दिएर बाँकी समय आफ्नै निजी क्लिनिक र अरूकोमा काम गर्न पुग्ने गरेको महेन्द्रनगरकी गङ्गा थापाले बताइन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सचिदानन्द देवले नियमित कार्यालयमा नगएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये केहीलाई कारबाही गरिएको बताए । उनले भने- 'आउने दिनहरूमा अब नियमित अनुगमन गर्नुपर्ला ।'
दक्ष जनशक्ति र औषधि अभावका कारण सुत्केरी महिलाको मृत्यु
धनुषा जिल्लाको यदुकुहा, सबैला, महेन्द्रनगर, धनुषाधाम, गोदार, ढल्केवर, कुर्था, तारापट्टी, प्रवाहा, घोडघास र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा प्रसूति गृह रहे पनि श्रोत साधन, प्रविधि तथा औजार, दक्ष जनशक्ति र औषधिको अभावको कारण सुत्केरी महिलाहरूको मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।
प्रसूति व्यथा लागेपछि गत असोज ३० गते जनकपुर अञ्चल अस्पताल अगाडिको 'आर्य केयर एण्ड क्योर' मा भर्ना गरिएकी धनुषा जिल्ला बिक्रमपुरकी २२ वर्षीया किरण यादवको परिवारजनले रगतको व्यवस्था गर्न नसक्दा भर्ना भएकै दिन मृत्यु भएको उपचारमा संलग्न डा. विजयकुमार सिंह बताउँछन् ।
प्रसूति व्यथा लागेपछि गत भदौ १४ गते जनकपुर अञ्चल अस्पतालको प्रसूति गृहमा भर्ना गरिएकी महोत्तरी भरतपुरकी २२ वर्षीया सुर्यकला पासवानको शल्यक्रिया गरेर मृत बच्चा झिकियो । तर, रक्तस्राव नरोकिएपछि त्यही रात अञ्चल अस्पतालबाट जानकी मेडिकल कलेजको सिटी हस्पिटलमा सारिएकी पासवानका बिहान तीन बजे मृत्यु भयो ।
यसअघि वैशाख ८ गते जनकपुरको जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिर्सच सेन्टरमा भर्ना गरिएका सरस्वती महराको दुई दिनको छोरालाई ६५ वर्षी अर्की बिरामी इन्द्रदेवी यादवको लागि लेखिएको औषधि चलाइयो । दुई डोजमा अवस्था गम्भीर भएपछि शिशुलाई काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा लैजान भनियो ।
जनकपुरका सरकारी अस्पताल र निजी क्लिनिकहरूमा यि यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । यस्ता घटना दैनिक भइरहेका हुन्छन् । बिरामीको ज्यानै गएपछि बोल्न सक्ने आफन्तले प्रहरीमा पुर्‍याएका घटना रकम लेनदेनमा मिलाइन्छ ।
पैसामूखी चिकित्सकहरूका कारण 'रिफरल सेन्टर' बन्न पुगेको अञ्चल अस्पताल
पैसामूखी चिकित्सकहरूका कारण 'रिफरल सेन्टर' बन्न पुगेको अञ्चल अस्पतालमा १ सय ६४ जना डक्टरको दरबन्दी रहेकोमा ६४ जना कार्यरत छन् । एघारौँ तहका १० डाक्टरको दरबन्दीमा दुई जना कार्यरत छन् ।
०७३ मङ्सिर ५ गते निरीक्षणमा आएका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले अञ्चल अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सेवा प्रवाहमा सुधार नआए चिकित्सक, कर्मचारी सबैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि सुधार नआएको स्थानीयको आरोप छ ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) भवन बनेको ६ वर्षा पनि उपयोग भएको छैन । आईसीयू सेवा सञ्चालन नहुँदा १ करोड २० लाख रुपियाँको उपकरण त्यसै बिग्रन लागेका छन् ।
१२ बेडको आईसीयू सेवा सञ्चालनको लागि २३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि दरबन्दीका कर्मचारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । आईसीयू सेवा चाहिने दैनिक दुई दर्जन भन्दा बढी बिरामीलाई अस्पतालले धरान वा विराटनगर 'रिफर' गर्ने गरेको छ ।
दुर्घटनामा अङ्गभङ्ग वा मस्तिष्कमा गम्भीर चोट लागेका बिरामीलाई पनि रिफर गर्नुपरेको अस्पतालले जनायो ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौराङ्ग मिश्र दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नभई राम्रो सेवाको अपेक्षा गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहिसकेका डा. सञ्जय ठाकुरले जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई साँच्चिकै अस्पताल बनाउन यसभित्र आमूल परिवर्तन अत्यावश्यक रहेको बताए ।
डा. ठाकुरको अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको लागि आन्तरिक रूपमा जनशक्ति, पूर्वाधार, अनुदान र बाहृय रूपमा सरकार, राजनीतिक दल, समाजिक अभियन्ता तथा अरु साझेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।